I-IMO Spy App - Hlola ku-IMO Messenger Text Chat kanye Nemilayezo Yezwi
I-IMO Inhloli Ye-App - Thatha Ukulawula Imiyalezo Imilayezo, Izithombe namavidiyo ku-IMO
I-IMO ikuvumela ukuthi wenze amakholi alalelwayo namavidiyo, thumela futhi wamukele imiyalezo, bese wabelana ngezithombe namavidiyo ku-Android ne-iPhone. Uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy IMO chat spy lunikeza umsebenzisi ukulandelela zonke izinto ze-IMO kudivayisi ehlosiwe.
Gcina Ingxoxo Yengxoxo Yombhalo Nezindaba Ezihlangene neTheOneSpy IMO Spy App
Noma yikuphi okuhloswe kwakho ukuxhumana nge-IMO noma ngesimo sombhalo, izithombe, umsindo noma ividiyo kungalandelwa nge-TheOneSpy IMO Chat spy feature. I izingxoxo eyodwa-on-one, izingxoxo zeqembu, ukwabelana ngemidiya kanye nalokho konke okukulo Uhlelo lokusebenza lomyalezo osheshayo lungatholakala kungakapheli imizuzwana embalwa.
I-TheOneSpy IMO Ukuqapha Isofthiwe Ivumela umsebenzisi ukuthi:
Gada imiyalezo yomsindo engenayo nephumayo
ithrekhi izingxoxo zombhalo weqembu
Buka izithombe, umsindo, namavidiyo abiwe ku-IMO
Londoloza imiyalezo namafayela abezindaba kwi-akhawunti ye-intanethi
Indlela Yokuhlola Izinkulumo Zengxoxo ze-IMO Ku-Cell Ucingo Ye-Android Nge-Panel Yokulawula I-TOS?
Okokuqala, qinisekisa ukuthi idivayisi yakho eqondisiwe igxiliwe noma i-jailbroken, futhi uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy lufakiwe kulo. Iya kwisiphequluli sakho bese uthayipha cp.theonespy.com ukuze ufinyelele ideshibhodi ye-TOS. Iya "kumasevisi ami" bese ukhetha i-IMO kwimenyu ukubuka zonke izingxoxo namafayela abezindaba.
Ngemuva kokungena ngemvume ngaphakathi kweDOSbhodi ye-TOS iya ku- IM izingodo ikhasi bese ukhetha izingodo ze-IMO kusuka kwimenyu ephezulu yokudonsa kwesokudla. Lokhu kuzobonisa yonke ingxoxo izingodo eziqoqiwe kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-IMO lengxoxo.
Kuya landelela imiyalezo yezwi IMO chofoza kuthebhu ye-3rd futhi kuzokuholela esigabeni semilayezo yezwi lapho unga khona lalela yonke imiyalezo yezwi ethunyelwe neyamukelwe.
Yikuphi Ukuqapha Nokulandelela Isici Sinikeza nge-IMO Spy software?
Kungani Khetha i-TheOneSpy IMO Spy App?
Noma yini evumela ukuthi ama-scoundrels afinyelele ezinganeni zakho ingaba kubi ikakhulukazi uma ngabe uhlelo lokusebenza lomlayezo osheshayo ovumela izinkolelo zibuke futhi zizwe ingane yakho ngaphandle kwezindleko. Amathuba okudla okukhulumisana nenzalo yakho nge-IMO aphezulu, ngakho qinisekisa qapha imisebenzi eyenziwe yi-kiddo yakho ku-IMO.
2.5 ngokusekelwe ku 5 amavoti
I-IMO Spy App